Wednesday 16th September 2020 08:00:07 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Caabuqu (Infection) waxa uu dhacaa marka noole debada ka yimi (foreign organism)
uu soo galo jidhka qofka kuna sababo dhibaato,noolahaasi wuxuu u ka helaa nafaqada qofkaas jidhkiisa si uu muddo badan u sii noolaado, una tarmo , ka dibna uu qabsado qaybo ka mid ah jidhka qofkaas.
Noolayaashaas waxa loo yaqaan cudur keenayaal (Pathogens ) .
Tusaalooyinka noolaha cudur keenayaalka ah waxaa ka mid ah bakteeriyada(bacteria), fayraska (Viruses) , fungaska(fungi), iyo prions.Qaar ka mid ah Caabuqyaddu (Infections) waa kuwo sahlan Oo aan la ogaan karin, laakiin kuwa kale waa kuwo daran oo noloshooda khatar gelinkara , qaarkoodna waxay u adkeysan karaan xitaa daaweynta.
Caabuqa ayaa lagu kala qaadi karaa siyaabo kala duwan. waxaa ka mid ah taabashada Maqaarka Qof qaba xanunka, dheecaan jidheedka Qofka , la xidhiidhidda saxarada , qaybaha hawada ka soo baxay Qof kale oo aad neef qaadato , iyo walax shaybaadh sida irbad oo qofka cudurka qaba taabtay.
Nidaamka difaaca jidhku waa darbiga ka ilaaliya jidhka noolayaasha sababa cudurada , laakiin markay tarmaan waxaa laga yaabaa in ka awood weynaadaan habka difaaca jirka.
Noocyada Caabuqa(Infection) Waxay kala yihiin
fayraska (Viruses) 2. bakteeriyada(bacteria) 3 fungaska(fungi) Iyo 4. prions
Nooca fayraska (Viruses)
Caabuqa fayraska waxaa keena fayras. Malaayiin nooc oo ah fayras ayaa loo maleeynayaa in ay ka jiraan aduunka , laakiin noocyadaas oo dhan 5,000 oo qudha ayaa la aqoonsaday . Fayrasyadu waxay ka kooban yihiin qaybo yar yar (code genetic )waxaana ku dahaadhan oo ilaaliya protein iyo xaydh.
Fayrusyada waxay qabsadaan noolaha iyakaa ka dibna isku xidha Unugyada noolaha . waxaanay ku sii daayaan waxyaabo ka kooban hidaha sidayaal . kuwaas oo u sahlaya inay ku tarmaan unugyada dhexdiisa iyakoo marba unug cusub u gudbaya ilaa ay unugyo badan wada qabsanayaan.
Fayrusyada oo dhan ma baabbi`iyaan unugyada dadka ,laakiin Qaar ka mid ah ayaa beddela shaqodda unugyada dadka .
Tusaale ahaan; Human Papillomavirus (HPV) ama Virus Epstein-Barr (EBV) Kuwaas oo badala shaqada unugyada oo aakhirna keeni kara cudurka kansarka iyakoo ku qasbaya unugyada inay u tarmaan si aan la xakamayn Karin .
Waxay sidoo kale bartilmaameedsan karaan kooxo gaar ah , sida dhallaanka ama carruurta yar yar.
Fayrasyadda mudo ayeyna tarmi Karin mararka qaarkood Oo aanu Qofka qaba fayraska muuqan Karin inuu buko mararka qaarkoodna waxa ay u muuqan karaa inuu ka bogsaday , laakiin waxaa dhici karta in mar mar danbe uu fayrasku dib usoo laabto oo Qofkii bukoodo.
Waxaa ka mid ah tusaalooyin cudurro fayraska leh:
1.Hargabka caadiga ah, badanaa waxaa keena rhinovirus, coronavirus, iyo adenovirus
2.Caabuqa Maskaxda(Ensephalites ) Iyo ka xuubka dahaadhka maskaxda (Meningitis), 0o ay sababaan infekshanada enterovirus iyo fayraska herpes
3.Boogaha iyo Caabuqa Maqaarka, oo ay sababaan Human Papilloma Virus (HPV) iyo herpes Simplex Virus (HSV).
4.Casiraadda Caloosha(Gastroenteritis) oo ay keento novavirus
Xaaladaha kale ee caabuqa fayraska waxaa ka mid ah:
Fayruuska Zika, ,Fayruska difaaca jirka baabi`iya (HIV),Hepatitis C, Dabaysha (polio) , Qandho ama waxay loo yaqaan Kuududiye (Dangue fever ) ,hargab doofaarka H1N1 ,Ebola.
Daawooyinka fayruska ah ayaa caawiya xaaladaha qaarkood, waxay ka hortagi karaan fayraska in ay isa soo saaraan ama waxay kor u qaadaan nidaamka difaaca ee Qofka.
Antibaayootigu waxba kama taro fayrusyada. Isticmaalka antibiotics fayruska ma joojin karaan taas badalkeeda waxay keeni karaan inay sababaan in qofku uu la qabsado oo hadhow ay difaaci waayan marka uu u baahdo.
2.Nooca Bakteeriyada (Bacteria )
Bakteeriyadu waa nooc ka mid ah waxyaabaha sababa cudurada faafa, waa unugyo isku dhafan oo loo yaqaan ‘prokaryotes’. Waxaa lagu qiyaasa inay kor u dhaafen bilyano . Inta badan dhulka badankiiisa waxa ku noolayaasha ku nool ugu badann bakteeriyada.
Bakteeriyadu waxay ku noolaan kartaa nooc kasta oo ka mid ah jawiga Cimilada , laga bilaabo kuleyl aad u daran ilaa qabow aad u daran, qaarna xitaa waxay ku noolaan karaan qashinka (Radioactive )-ka ka dhasha .
Waxaa jira trillions nooc oo ka mid ah bakteeriyada, dhowr nooc oo ka mid ah ayaana cudurada ku keena Aadanaha. Qaar ka mid ah bakteerutadu waxay ku nool yihiin gudaha jidhka bini’aadamka iyadoon dhibaato loo geysan Waxaana loo yaqaan bacteeriya Wanaagsan (Good Bacteria ), tusaale ahaan mindhicirka ama marinnada hawada. Qaar ka mid ah bakteeriyada "wanaagsan” waxay weeraraan bakteeriyada "xun” waxaanay ka hortagi karaan inay keenan cuduro.
Si kastaba ha noqotee, cudurada bakteeriyada qaarkood waa kuwo sababi kara dhimasho ah waxaan ka mid ah Shuban biyoodka ( Chalera) , Gawracatada(diphtheria) ,Daacuun calooleedka (Dysentery) , Cudurka Bubonic(bubonic plague) ,Caabuqa Sanbabka(Pneumonia) ,Qaaxada(TB) ,Tayfoodha(Typhoid) ,Tayfuska(Typhus)
Qaar ka mid ah cudurrada bakteeriyadu waa ee aan aadka u darnayn iyagana waxa ka mid ah :
Bakteeriyada ku dhacda dahaadhka maskaxda (meningitis),Caabuqa dhagaha (Otitis Media) ,Caabuqa sanbabka (Pneumonia) ,Qaaxada sahlan(TB) ,Infekshinka qaybta sare ee neef-mareenka (Upper respiratory Track infection ),
Caabuqa caloosha (Gastritis), Ku sumooba cuntada (Food poisoning ) ,Caabuqa indhaha ,(eye infections) ,Caabuqa sanka (Sinusitis) ,Caabuqa kaadimareenka (Urinary Track Infection )
,Caabuqyada maqaarka (Skin Infection),Cudurada galmada lagu kala qaado (Sexually Transmitted Diseases) Caabuqyada bakteeriyada waxaa lagu daaweyn karaa antibiyootiko, laakiin noocyada qaar ayaa noqda mid u adkaysta waxayna ku noolaan karaan daaweynta.
Nooca Caabuqa Funguska
Caabuqa funguska (Fungi Infection ) Waa noole ah inta badan Hal –unugle kaas oo burburin kara nuugina kara maadooyinka unuga isagoo isticmaalaya dedejiyayaal (Enzymes).
Waxay had iyo jeer waa waxay ku tarti karaan iyakoo halkii unug u kala qaybinaya laba qaybood habkaas Oo loo yaqaan (single-celled spores) fungusku caadi ahaan qaabkiisa dherer leh qaabka dhulubada Oo kale leh qaybo yar oo soo lalada iyo Uurku jirka ugu weyn.
Waxaa jira qiyaastii 51 milyan oo nooc oo ah fungus. infections badan oo fangas ka ah ayaa ka dhex muuqan karra lakabyada sare ee maqaarka, Iyo qaar ka mid ah ayaa iyakuna ka u taalaabi karaa ilaa lakabyada hoose ee Maqaarka.
Qaadashada neef leh fangas waxay keeni kartaa caabuq fangas oo guud , sida cabeebka, ama candidiasis. Cudurada saamayn ka jirka oo dhan.
Jirku wuxuu sida caadiga ah leeyahay qaar ka mid ah bakteeriyada "wanaagsan” oo kaa caawin in ay joogteeyaan dheelitirka shaqada ee mindhicirrada, afka, Xubnaha taranka dumarka , iyo qaybaha kale ee jidhka ah .
Haddii bakteeriyada "wanaagsan” Ee dadka ku nool la wada baabbi’iyey, tusaale ahaan, iyadoo aad loo isticmaalayo Daawooyin antibiotics ah oo adan waqti dheer , fangaska waa ay kori koraan waxaanay keeeni karaan dhibaatooyin caafimaad.
Dadka leh a halista dheeraad ahee ay ku qaadi karaan caabuq fangas ka mid ah dadka:
Dadka Isticmaal antibiyootiko xoog leh wakhti dheer
Dadka leh xanuunada diciifiya habdhiska difaaca dadka , , tusaale ahaan, in HIV ama AIDS, Macaanka (Diabetes),
Dadka isticaala daaweynta kansarka (chemotherapy agents) , iyo kuwii soo xubnaha aanay lahayn la geliyey sida (Kediladda oo kale ) oo loo qoray inay qaataan daawooyinka difaaca jirka hoos loogu dhigo.
Tusaalooyinka Cududrada caabuqa Funguska waxaa ka mid ah: Dooxada qandho (valley fever, or coccidioidomycosis) , athlete’s foot, Ringworm ,Iyo Xanuunada Indhaha qaarkood Finanka qaarkood ayaa iyakuna noqon kara qaar ay sababeen Caabuq fangas of maqaarka.
4.Nooca Caabuqa Prion-ka (Prion Infection )
Prion-ku waa protein ah ay ku jiraan waxyaabaha hiddaha(Genetic) lahayn.sida caadiga ahna ma laha wax dhibaato ah , laakiin haddii oo xareeyo qaab aan caadi ahayn, waxay noqon kartaan qaar sababa xanuun saameya qaabka maskaxda ama qaybaha kale ee habka dareemayaasha jirka.
Cudurada Prion aad uma badna , laakiin waxay u faafan si deg-deg , dhammaantoodna waa kuwo dhimasho sababi kara. Badanaana waxay sababaan cuduro maskaxda is-beddelka , sida: Encephalopathy bacterine spongiform (BSE), Creutzfeldt-Jakob (CJD)
Cilmi-baadhiso ayaa la xidhiidhiya xanuunka asaaasaga(Alzheimer-ga) inuu sababi karaan Caabuqa Prionska
Astaamaha ama Calaamadaha
Calaamadaha infekshanku waxay ku xiran yihiin Fal celinta noolaha iyo sidoo kale goobta infekshanka ka dhacay. fayrusyada waxay abaaran unugyo gaarka ah, sida kuwa xubnaha taranka ama neef-mareenka sare. Sida Viruska rabies oo bar-tilmaadkeedsada habka dareemayaasha jirka. Fayrusyada Qaar ka mid ah ayaa abaaro unugyada maqaarka, taasoo keenta finanka.
Qaar kale beegsan unugyada kala duwan , taasoo keentay in calaamadaha kala duwanaadan. Fayruska durayg ( flu virus) wuxuu sababi karaa duuf badan , muruq xanuun, iyo calool xanuun.
Qofka qaba cudur bakteeriyo badanaa waxay la kulmaan meesha oo casaata iyo kulaylka, barar, qandho, xanuun goobta cudurka, iyo qanjirada oo barara. infection bakteeriyada wey yartahay inay saameen ballaaran oo ku yeeshan guud ahaan jidhka marka loo eego ka fayruska.
Calaamadaha caadiga ah ee cudurada prion waxaa ka mid ah dhaawaca maskaxda, xusuusta, iyo dhibaatooyinka garashada. Waxay sidoo kale kicin karaan in maskaxda inay ku samaysmaan waxyaabo xanibi kara xusuusta iyo maskaxdana dhaawici kara.
Ka hortagga Cubuuqyada xanuunaday keenan
Ma jiro hab keliya oo looga hortago dhammaan cudurrada faafa, laakiin talooyinka soo socda ayaa yareyn kara khatarta gudbinta:
1.Dhaq gacmahaaga marar badan, gaar ahaan ka hor iyo ka dib diyaarinta cuntada iyo ka dib isticmaalka musqusha.
2.Nadiifi cuntada markaa diyaarinayso.
Hel tallaal kasta oo lagula talagalay.
Isticmaal daawooyinka Kaliya antibiyootikada marka la qoro oo keliya hubso in aad dhammaystirto kooras kasta oo lagu tali
yey xitaa haddii calaamadaha ay horay u sii fiicnaanayaan saadaasha iyo hadii kaleba.
Nadiifi Meelaha laga yaabo in ay ku badan tahay bakteeriyada, sida jikada iyo musqusha.
Iska ilaali shayada shakhsiyeed ee qof gaarka u leeyahay sida burushka cadayga, shanlooyinka, makiinadaha , weelasha wax lagu cabbo, iyo maacuunta jikada.
Raac talobixinta dhakhtarka ee ku saabsan safarka ama shaqada markaad xanuunsato, sida aad u qaadsiin karto dadka kale.
Nolol caafimaad qaba oo firfircoon ayaa gacan ka geysan kara nidaamka difaaca jirka oo awood u leh inuu ka difaaco jirka noocyada kala duwan ee infekshanka.
Dr Cabdirashiid Maxamed
Ref: Medscape, Mayo Clinic, Internal Medicine And Infectious Disease Books
Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Oo 5 Milyan Oo Birr Ugu Deeqay Canfarta Iyadoo Soomalidu ka baahantahay [ Muuqa
"Saajin Waxaan Leeyahay, Yaan la isku kiin Garaacin Saylici Ee Inaadeerkaa U Tanaasul" Xildhibaan Kasoo Jeeda Go
Maxaad Ka Taqaan Labada Is-bahaysi Siyaasadeed Ee Isku Haya Siyaasadda Soomaaliya?
Maxaad Ka Taqaanaa Farshaxanka Laasgeel Ee Kumannaan Sano Ka Hor La Sameeyay?
[Daawo:-] Reer Hargeysa Oo La Waydiiyay Xildhibaanka Aad Dooranayso Maxaad Ku Dooran Lahayd ?
Fulaynimo ka weyni ma jirto inaad hor fadhiisan kari weydo oo aad la doodi kari weydo qof kaa fikir duwan !
Maxaad Kala Socotaa Heerka Uu Marayo Xanuunka Coronavirus Ee Qaaradda Afrika?
"Aniga maxaad igu diideen"...!